စကျတငျဘာ 17, 2019 – Healthy Life Journal
ကိုယ့်ဘ၀ပိုတောက်ပစေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း ၇ သွယ်
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရှင်ပါမောက္ခမာတင်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကောင်းတွေရှိတာက ဘ၀ကိုအကောင်းမြင်တဲ့ သဘောနဲ့နေထိုင်နိုင်ပြီး ပိုပျော်ရွှင်တောက်ပစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘ၀မှာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတာကို တွန်းလှန်နိုင်အောင်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင် ကျန်းမာရေးပိုကောင်းအောင်၊ အောင်မြင်တိုးတက်မှုပိုရအောင် အခြေခံစည်းမျဉ်း ၇ရပ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ကြောင်း သူကအကြံပြုထားပါတယ်။ စည်းမျဉ်း (၁) မှန်လိုကျင့်ပါ...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး ။ မြန်မာမှာက လူတန်းစား အမျိုးမျိုးက ပရုပ်ဆီကို အလွယ်ပဲ သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ- ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်ရင် တချို့ကလည်း ပုရုပ်ဆီလိမ်းခိုင်းတယ်၊ တချို့ကလည်း မလိမ်းသင့်ဘူးပြောတယ်။ လည်ပင်းနာရင် ပုရုပ်ဆီမျိုချရင် သက်သာတယ် ပြောကြတယ်၊ မလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်း ပြောကြတယ်။ ကြားဖူးနားဝနဲ့...
ရေတံခွန်ဆီသွားပါ စိတ်ဖိစီးမှုများနေသလား၊ ရေတံခွန်ဆီကို သွားပါ။ ရေတံခွန်ရဲ့အခြေရှိ လေထဲမှာ လွင့်နေတဲ့ မော်လီကျူးအမှုန်တွေက စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ၀က်စ်လီရန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ၁၅-၃၀ မိနစ်လောက် ရေနဲ့ပက်ဖျန်းပေးတာက စိတ်ဓာတ်ကျတာကို သက်သာစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ဦးနှောက်ထဲမှာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင်ပမာဏကိုတိုးစေလို့ပါ။...
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုရီးယားလှပျိုဖြူတွေက အသက်ကြီးလာရင်တောင် အသားအရေတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းနေကြဆဲပါပဲ။ အသက် ၅၀ အရွယ်တွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း အသက် ၃၀ အရွယ်လောက်လို့ ထင်ရတာကြောင့် သူတိုရဲ့အသားအရေထိန်းနည်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁) အဆင့်ဆင့် သန့်စင်ခြင်း မျက်နှာကို အရင်ဆုံး...
၀မ်းချုပ်တတ်သူတို့အတွက် ၀မ်းနုတ်ဆေးအစွမ်းရှိ သဘာဝအစာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၀မ်းချုပ်တဲ့အခါ နေလို့ထိုင်လို့ မအီမသာဖြစ်စေပါတယ်။ ၀မ်းချုပ်တတ်သူတွေအနေနဲ့ ၀မ်းနုတ်ဆေး အစွမ်းရှိတဲ့ သဘာဝအစာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ် ရှားစောင်းလက်ပပ်ထဲမှာပါတဲ့ အန်သရာကွီနုန်းက အူလမ်းကြောင်းမှာ ရေဓာတ်ပမာဏများစေပြီး ၀မ်းနုတ်ဆေးအစွမ်းရှိပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်း အချွဲတွေကို ကင်းစင်စေပြီး...
ရေကြီးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အရေပြားရောဂါများ (၂)
ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ကပ်ပါးပိုးတွေကြောင့် ဘယ်လိုအရေပြားရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. ကပ်ပါးပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားရောဂါတွေကတော့- – မြေကြီးပေါ်ကို ဖိနပ်မပါဘဲလျှောက်ရင် သန်ကောင်ဖောက်ဝင်တဲ့ အရေပြားရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Cutaeneous Larva Migrans သန်ကောင်ကြောင့် အရေပြားမှာ သန်ကောင်လမ်းကြောင်း...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ကင်ဆာရောဂါအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ ။ ကင်ဆာရောဂါတွေမှာ အမြဲတမ်းနှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ Primary Malignant Tumor နဲ့ Secondary Malignant Tumor ဆိုပြီး...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ဘ၀မှာ နေ့စဉ်လိုလို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ စိတ်ခွန်အားရှိရပါမယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကောင်းကောင်းစား၊ အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ဦးနှောက် စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရချိန်မှာ ဟိုက်ဟိုသားလမတ်စ်က ပစ်ကျူထရီ ဂလင်းကို အချက်ပြပြီး...